म,सा,ज गर्न पुगेका युवकलाइ जव युवतीले यौ:न प्रस्ताव राखेपछि… – " सुलभ खबर "
म,सा,ज गर्न पुगेका युवकलाइ जव युवतीले यौ:न प्रस्ताव राखेपछि…
काठमाडौं। मसाज सेन्टरमा मसाज गराउन पुगेका एक युवकले मसाज मात्र गराउने भन्दै यौ”’न सम्बन्धका लागि अस्वीकार गरेपछि ग”’म्भीर परिणाम भोग्नु परेको छ । युवकलाई २ युवतीसहित ४ जनाले यसरी कु”टे कि उनका कैयौं ह”ड्डी भाँ””चिए । पुलिसले चारैजना आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ । खलीज टाइम्सका अनुसार पीडित युवक अल्जेरियाका हुन् भने उनलाई कु”’ट्ने चारैजना भियतनामी हुन् ।
यी भियतनामीहरु दुई महिला र २ पुरुष थिए । दुबइको जुन फ्ल्याटमा उनीहरु बस्थे त्यहाँ उनीहरुले मसाजको नाममा अ”वैध यौ”नध”’न्दा चलाउँथे । एक व्यक्ति मसाज गराउन उनीहरुको मसाज सेन्टर पुगे । उनले मसाजको लागि ४०० दिराम रकम बुझाए । ती व्यक्तिका अनुसार जब उनी भित्र गएर कपडा खोले त्यसपछि उनलाई टावेल समेत दिइएन । त्यसपछि त्यहाँ एक महिला आइन् । ती महिलाले उनीसँग यौ”’नस”’म्बन्धी कुरा गर्न थालिन् ।
पीडितका अनुसार उनले महिलासँग आफूले से””’क्स” नगर्ने र केवल मसाजको लागि आएको बताए । त्यसपछि उनीहरुबीच विवाद भयो र पीडित युवकले आफ्नो ४०० दिराम पैसा फिर्ता मागे । उनले पैसा फिर्ता मागेपछि झ””’गडा भयो । पीडितले पुलिसलाई बताएअनुसार त्यहाँ तीन जना अरु मानिसहरु पनि थिए जसमध्ये अर्की एक केटी पनि थिइन् ।
ती सबैले मिलेर उनलाई ‘कु”’टपि””ट गरेकने पीडितले पुलिसलाई बताएका छन् । उनले आफूलाई स्टिल ट्युबले समेत कुटिएको बताएका छन् । पुलिले मसाज पार्लरको आडमा अ”’वैध यौ”नध”’न्दा चलाएको र युवकलाई कु”’टपि”’ट गरेको आरोपमा चारैजनामाथि मुद्दा चलाएको छ । कु”’टपि”ट गर्ने महिलाहरुको उमेर ३३ र ३५ वर्ष तथा पुरुषको उमेर ३९ र १८ वर्ष भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै शरीरलाई आराम दिन र रोगबाट मुक्ति पाउन मसाज ‘रिफ्रेसमेन्ट’को सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । तर, काठमाडौंका मसाज सेन्टरहरुमा मसाज होइन ‘ससाज’ अर्थात यौ””न धन्दा धेरै हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ- ‘मसाज पार्लरमा काम गर्ने महिलाहरु मध्ये ६०.५ प्रतिशतले कार्यक्षेत्रमा यौ””न गतिविधिमा संलग्न भएको बताए ।’डान्सबारमा काम गर्ने २० प्रतिशत र क्याबिनमा काम गर्ने २ प्रतिशतले यौ””’न गतिविधि हुने स्वीकार गरेका छन् ।
अध्ययनले डान्स बार तथा मसाज पार्लरसहितका मनोरन्जन क्षेत्रमा काम गर्ने किशोरी र महिलामा जनजाति समुदायका बढी रहेको देखाएको छ ।ती क्षेत्रका ग्राहक भने सुरक्षाकर्मी बढी छन् । रक्षा नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले हालै गरेको अध्ययन अनुसार डान्स बार, मसाज पार्लर, क्याबिन रेष्टुँरामा काम गर्ने महिला तथा किशोरीमा ५९ प्रतिशत जनजाति समुदायका छन् ।
अध्ययनमा संलग्नहरुले दिएको उत्तरका आधारमा तयार पारिएको निष्कर्षमा डान्स बार तथा मसाज पार्लरमा काम गर्ने झण्डै आधा अर्थात ४७ प्रतिशत १५ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका छन् भने ४४.५ प्रतिशत २२ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका छन् ।
मनोरन्जन क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैले परिवारलाई समेत काम गर्ने स्थान र क्षेत्र लुकाउँछन् । अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ- ‘८२.५ प्रतिशत उत्तरदाताले कार्यस्थलमा यौ””नज”न्य क्रि””याकलाप हुने गरेको स्वीकार गरेका छन् ।’
मसाज सेन्टरका नाममा समेत यौ”’जज”’न्य क्रि””’याकलाप हुने गरेको भन्दै प्रहरीले बेला-बेला छापा मा”’र्ने गरेको छ ।रक्षा नेपालले हालै गरेको छलफलमा सहभागी मध्ये केहीले आफूहरु मसाजमा काम गर्दा ब’ला”’त्कृ”””त भएको समेत सुनाएका थिए ।तर, केहीले भने सबै मसाज सेन्टरहरुमा यौ”न्यज””न्य गतिविधि नहुने बताए । प्रहरीले अनावश्यक रुपमा आफूहरुलाई दुःख दिने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
धेरैजसो ग्राहक सेना र प्रहरी
अध्ययनमा सहभागीले दिएको जवाफ अनुसार डान्स बार, मसाज पार्लर, क्याबिन रेष्टुराँमा पुग्नेहरुमध्ये ९२ प्रतिशत सेना र प्रहरी हुन्छन् । ग्राहक जाने सेना र प्रहरीहरु २१ देखि ५० वर्ष उमेरसम्मका छन् ।
विदेशी ग्राहकहरुमा भने भारतीय नागरिक बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ । रक्षा नेपालका अनुसार अनुसन्धानमा रेष्टुराँ, डान्स बार, मसाज सेन्टर तथा केही गेष्ट हाउसमा कार्यरत गरी पाँच सय किशोरी तथा महिला संलग्न थिए ।
उनीहरुमध्ये धेरैले सशस्त्र द्व”’न्द्वका कारण विस्थापित भएपछि काठमाडौंसम्म आएको जवाफ दिएका छन् । उनीहरुमध्ये धेरै ठमेल आसपास बस्छन् ।अध्ययनका अनुसार यस्तो पेशामा लाग्ने धेरै सामान्य साक्षरहरु छन् । एक प्रतिशत मात्र उच्च शिक्षा पाएकाहरु छन् । २६ प्रतिशत पूर्ण निरक्षर र ३९ प्रतिशत सामान्य साक्षर रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला भाइरल भएकी एक नवजात शिशु जस्ले जन्मने बित्तिकै रु’नुको स,ट्टा रि’साइन् उनी, कारण यस्तो छ !
सोमबार भगवानको पनि देवता महादेवको पूजा ,आज यस्तो काम गरे मनले चिताएको पुग्छ !
सोमबारको दिन देवताको पनि देवता आरध्यदेव महादेवको पूजा गरिन्छ ।अविवाहित नारीले आफुले सोचको जस्तै बर
काठमाडौं १ माघ- मानिसले मानिसकै मा’सु खा’एका घ’टनाबारे सुन्दा हाम्रो आङ नै जिरिङ्ग हुन्छ ।
सोशल मिडियामार्फत हालै गरिएको एक सर्भेमा महिलाहरुसँग सोधिएको थियो, ‘तपाईं के कुरा हाम्रो श्रीमान वा
एजेन्सी- मानिसहरु घरमा श्रीमती भएर पनि बाह्य सम्बन्धमा हुन्छन्। यसले परिवारलाई भाड्ने काम गर्दछ ।
‘म अपाङ्ग महिला हुँ तर, नियमित से’क्स गर्छु’
काठमाडौं । इरानमा करिब एक करोड मानिस कुनै न कुनै अपाङ्गताबाट ग्रस्त छन् । रुढीवादी
भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७६ साल फाल्गुन १३ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०२० फेब्रुवरी २५ तारिख
प्रहरी पोशाकमै श्रीमतीसंग टिकटक भिडियो बनाउँदा प्रहरी नायब निरीक्षक थापा का’रवाहीमा,यस्तो थियो टिकटक भिडियो (भिडियो)
हावाहुरी सहितको भिषण असिना पानीले भरतपुरका सडक जलमग्न